Imboni yekhamera ye-M6-Measurement kanye nabakhiqizi | Imvula
1: I-UAV ekhweziwe：M200 V2、I-M210 V2、I-M210 RTK V2、I-M300RTK, kanye nanoma iyiphi enye i-multi-roter/fixed-wing/VTOL
2:Ukuhlanganiswa okuphezulu nama-DJI UAVs, kulula ukusebenza
3:Sekela ubuchwepheshe be-TimeSync ukuthuthukisa ukunemba kwe-RTK Positioning Data
4:Incane futhi ilula, khulisa impilo yebhethri ye-UAV
5:Ubuncane besikhathi sokuchayeka≤0.8s
6:Imemori khadi eshintshwayo
7:Ilensi eshintshwayo, ilungele izinhlelo zokusebenza ezahlukene
8:Thola impendulo yesimo sokusebenza selensi ngesikhathi sangempela, gwema indiza engavumelekile
9:Vula futhi uvale indiza ngokuhambisana, noma ngokwenza'
10:Funda ngokuqondile idatha ye-GPS evela kuma-drones
Ubukhulu-akubandakanyi ikhava yelensi (mm)
Ukulungiswa okuphelele (MP)
Ubude bokugxila (mm)
Ubuncane besikhathi sokuchayeka
Imodi yokuvezwa kwekhamera
Isixhumi esibonakalayo sokulungisa ipharamitha
I-Trigger, i-serial, ukuchayeka phakathi
Okokufaka kwamandla (V)
Imodi yokunikeza amandla ekhamera
Ubukhulu. ukusetshenziswa kwamandla (W)
Icala eliyimpumelelo lezithombe ze-oblique
——Sebenzisa imodeli ye-3D ukwenza inhlolovo ye-cadastral ezindaweni eziphakeme kakhulu
Ngemuva kweminyaka eminingana yentuthuko, manje eseShayina, ukuthwebula izithombe ezitshekile sekusetshenziswe kabanzi kumaphrojekthi wokuhlola we-cadastral yasemaphandleni. Kodwa-ke, ngenxa yokukhawulelwa kwezimo zobuchwepheshe zemishini, ukuthwebula kwezithombe ezitshekile kusesebuthakathaka ekulinganisweni kwe-cadastral yezigcawu zamaconsi amakhulu, ikakhulukazi ngenxa yokuthi ubude obugxilwe kanye nefomethi yesithombe yelensi yekhamera etshekile ayikho ezingeni. Ngemva kweminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho kwephrojekthi, sithole ukuthi ukunemba kwemephu kufanele kube phakathi kuka-5 cm, bese i-GSD kufanele ibe phakathi kuka-2 cm, futhi imodeli ye-3D kufanele ibe yinhle kakhulu, imiphetho yesakhiwo kufanele iqonde futhi icace.
Ngokuvamile, ubude bekhamera obugxile esetshenziselwa amaphrojekthi wasemaphandleni wokulinganisa i-cadastral bungu-25mm ngokuma mpo kanye no-35mm oblique. Ukuze kuzuzwe ukunemba kwe-1:500, i-GSD kufanele ibe phakathi kuka-2 cm. Futhi ukuqinisekisa ukuthi, ukuphakama kokundiza kwama-drones ngokuvamile kuphakathi kuka-70m-100m. Ngokwalokhu kuphakama kwendiza, ayikho indlela yokuqedela ukuqoqwa kwedatha yezakhiwo eziphakeme ezingaphezu kuka-100m. Ngisho noma uqhuba indiza noma kunjalo, ayikwazi ukuqinisekisa ukugqagqana kophahla, okuholela kukhwalithi embi yemodeli. .Futhi ngenxa yokuthi ukuphakama kwempi kuphansi kakhulu, kuyingozi kakhulu ku-UAV.
Ukuze kuxazululwe le nkinga, ngoMeyi 2019, senze ukuhlolwa kokuqinisekiswa kokunemba kwe-Oblique Photography yezakhiwo eziphakeme zasemadolobheni. Injongo yalokhu kuhlola iwukuqinisekisa ukuthi ingabe ukunemba kokugcina kwemephu kwemodeli ye-3D eyakhiwe ikhamera etshekile ye-RIY-DG4pros ingahlangabezana yini nemfuneko ye-5 cm RMSE.
Kulesi sivivinyo, sikhetha i-DJI M600PRO, efakwe ikhamera ye-Rainpoo RIY-DG4pros oblique enamalensi amahlanu.
Indawo yokuhlola kanye nokuhlelwa kwamaphuzu okulawula
Ukuphendula lezi zinkinga ezingenhla, kanye nokwandisa ubunzima, sikhethe ngokukhethekile amaseli amabili anesilinganiso sokuphakama kwesakhiwo esingamamitha angu-100 ukuze ahlolwe.
Amaphoyinti okulawula asethwa kusengaphambili ngokuya ngemephu ye-GOOGLE, futhi indawo ezungezile kufanele ivuleke futhi ingavinjwanga ngangokunokwenzeka. Ibanga phakathi kwamaphoyinti lisebangeni lika-150-200M.
Indawo yokulawula iyisikwele esingu-80*80, ihlukaniswe ngokubomvu nokuphuzi ngokuvumelana ne-diagonal, ukuze kuqinisekiswe ukuthi isikhungo sephoyinti singabonakala ngokucacile lapho ukubonakaliswa kuqine kakhulu noma ukukhanya kunganele, ukuze kuthuthukiswe ukunemba.
Ukuhlela Umzila we-UAV
Ukuze siqinisekise ukuphepha kokusebenza, sigcine ukuphakama okuphephile okungamamitha angu-60, futhi i-UAV indize ngamamitha angu-160. Ukuze siqinisekise ukugqagqana kophahla, siphinde sanyusa izinga lokugqagqana. Izinga lokugqagqana kwe-longitudinal lingu-85% futhi izinga lokugqagqana elinqamulayo lingu-80%, futhi i-UAV indize ngesivinini esingu-9.8m/s.
Umbiko we-Aerial Triangulation(AT).
Sebenzisa isofthiwe ye-“Sky-Scanner” (Yathuthukiswa yi-Rainpoo) ukuze ulande futhi ucubungule ngaphambili izithombe zangempela, bese uzingenisa kusofthiwe yokumodela ye-ContextCapture 3D ngokhiye owodwa.
Umbiko wokuhlanekezelwa kwelensi
Kusuka kumdwebo wegridi yokuhlanekezela, kuyabonakala ukuthi ukuhlanekezela kwelensi ye-RIY-DG4pros kuncane kakhulu, futhi umjikelezo ucishe uqondane ngokuphelele nesikwele esijwayelekile;
Iphutha lokwenqaba i-RMS
Ngenxa yobuchwepheshe be-optical be-Rainpoo, singakwazi ukulawula inani le-RMS ngaphakathi kwe-0.55, okuyipharamitha ebalulekile ekunembeni kwemodeli ye-3D.
Ukuvumelanisa amalensi amahlanu
Kuyabonakala ukuthi ibanga eliphakathi kwephuzu eliyinhloko lelensi eqondile emaphakathi kanye nephuzu eliyinhloko lamalensi atshekile yilawa: 1.63cm, 4.02cm, 4.68cm, 7.99cm, khipha umehluko wesikhundla sangempela, amanani wephutha yilawa: - 4.37cm, -1.98cm , -1.32cm, 1.99cm, umehluko omkhulu wesikhundla ngu-4.37cm, ukuvumelanisa kwekhamera kungalawulwa ngaphakathi kwe-5ms;
I-RMS yamaphoyinti okulawula abikezelwe kanye nangempela asukela kumaphikseli angu-0.12 kuya ku-0.47.
3. Ukumodela kwe-3D
Singakubona lokho ngoba i-RIY-DG4pros isebenzisa amalensi amade obude obugxilile, indlu engezansi kwemodeli ye-3d icace kakhulu ukuyibona. Ubuncane besikhawu sesikhathi sokuchayeka sekhamera singafinyelela ku-0.6s, ngakho-ke noma izinga lokugqagqana kwe-longitudinal likhushulwa laya ku-85%, akukho ukuvuza kwesithombe okwenzekayo. Imigqa yaphansi yezakhiwo eziphakeme kakhulu icace kakhulu futhi iqondile ngokuyisisekelo, okuqinisekisa ukuthi singathola izinyathelo ezinembe kakhudlwana kumodeli kamuva.
4. Hlola Ukunemba
Sisebenzisa isiteshi esiphelele ukuqoqa idatha yesikhundla samaphoyinti bese singenisa ifayela le-DAT ku-CAD. Bese uqhathanisa ngokuqondile idatha yendawo yamaphoyinti kumodeli ukuze ubone umehluko wawo.
Kulesi sivivinyo, ubunzima buwukuthi ukwehla okuphezulu nokuphansi kwendawo yesehlakalo, ukuminyana okuphezulu kwendlu kanye nephansi eliyinkimbinkimbi. Lezi zici zizoholela ekwandeni kobunzima bendiza , ingozi ephakeme, kanye nemodeli ye-3D embi kakhulu, okuzoholela ekwehleni kokunemba kuhlolo lwe-cadastral.
Ngenxa yokuthi ubude befocal ye-RIY-DG4pros yinde kunamakhamera avamile atshekile, iqinisekisa ukuthi i-UAV yethu ingandiza endaweni ephephile ngokwanele, nokuthi ukucaca kwesithombe sezinto eziphansi kungaphakathi kuka-2 cm. Ngesikhathi esifanayo, i-lens yefreyimu egcwele ingasisiza ukuthi sibambe ama-engeli amaningi ezindlu lapho sindiza ezindaweni zokwakha ezinabantu abaningi, ngaleyo ndlela sithuthukise ikhwalithi yemodeli ye-3D. Ngaphansi kwesisekelo sokuthi wonke amadivayisi wehadiwe aqinisekisiwe, siphinde sithuthukise ukugqagqana kwendiza kanye nokuminyana kokusabalalisa kwamaphoyinti okulawula ukuze siqinisekise ukunemba kwemodeli ye-3D.
izithombe ze-oblique zezindawo eziphakeme zokuhlola i-cadastral, kanye ngenxa yokulinganiselwa kwemishini kanye nokuntuleka kokuhlangenwe nakho, kungalinganiswa kuphela ngezindlela zendabuko. Kodwa umthelela wezakhiwo eziphakeme kakhulu kusignali ye-RTK futhi kubangela ubunzima nokunemba okungalungile kokulinganisa. Uma singasebenzisa i-UAV ukuqoqa idatha, umthelela wamasignali wesathelayithi ungasuswa ngokuphelele, futhi ukunemba okuphelele kokulinganisa kungathuthukiswa kakhulu. Ngakho impumelelo yalolu vivinyo ibaluleke kakhulu kithi.
Lokhu kuhlola kufakazela ukuthi i-RIY-DG4pros ingakwazi ngempela ukulawula i-RMS ebangeni elincane lenani, inokunemba okuhle kwemodeli ye-3D, futhi ingasetshenziswa kumaphrojekthi wokulinganisa anembile wezakhiwo eziphakeme.
Ithini ifomethi yolwazi olungahluziwe?Ngifanele ngilucubungule kanjani?
ifomethi yezithombe ezingavuthiwe ithi .jpg.
Ngokuvamile ngemva kwendiza, okokuqala sidinga ukuwalanda kukhamera, edinga isofthiwe esiyiklame “i-Sky-Scanner”. Ngale softhiwe, singadawuniloda idatha ngokhiye owodwa, futhi sikhiqize ngokuzenzakalelayo namafayela ebhulokhi e-ContextCapture.
Xhumana nathi ukuze wazi kabanzi mayelana nezithombe ezingavuthiwe >
Inqubo yokufaka ezisekelweni ezahlukene kungaba i-UAV fixed wing noma izindiza ezincane?
I-RIY-DG4 PROS ingafakwa kuwo womabili ama-rotor amaningi kanye nama-drones anamaphiko angaguquki ukuze kutholwe idatha yezithombe ezitshekile.Futhi ngenxa yeyunithi yokulawula, iyunithi yokudlulisa idatha nezinye izinhlelo ezingaphansi ziyi-modular, ngakho-ke kulula ukukhwezwa nokushintshwa.Siyasebenza. nezinkampani eziningi ze-drone emhlabeni wonke, zombili i-fixed-wing kanye ne-multi-rotor ne-VTOL nendiza enophephela emhlane, kuvela ukuthi zonke ziguqulelwe kahle kakhulu.
Kungani ukuvumelanisa amalensi amahlanu kubaluleke kangaka?
Sonke siyazi ukuthi ngesikhathi sokundiza kwe-drone, isignali yokuqalisa izonikezwa amalensi amahlanu ekhamera ye-obique. Ngokombono, amalensi amahlanu kufanele adalulwe ngesikhathi esifanayo, bese idatha ye-POS izorekhodwa kanyekanye.
Kodwa ngemva kokuqinisekisa kwangempela, sifinyelele esiphethweni: lapho ulwazi lokuthungwa kwesigcawu luyinkimbinkimbi kakhulu, likhulu inani ledatha lensi engakwazi ukuyixazulula, iminyanise, futhi iyigcine, kanye nesikhathi esiningi esithathayo ukuqedela ukurekhoda.
Uma isikhawu phakathi kwamasignali e-trigger sisifushane kunesikhathi esidingekayo ukuze ilensi iqedele ukurekhoda, ikhamera ngeke ikwazi ukwenza ukuchayeka, okuzophumela “ekungabini kwesithombe” .
I-BTW，i ukuvumelanisa nakho kubaluleke kakhulu kusiginali ye-PPK.
Kuyini ukusebenza kahle kwe-DG4Pros? Ngiwamisa kanjani amapharamitha afanele?
I-DJI M600Pro + DG4IZIPHUMA
Ukuphakama kwendiza (m)
Isivinini sendiza (m/s)
Indawo yendiza eyodwa (km2)
Inombolo yendiza yosuku olulodwa
Indawo yokusebenza isiyonkeUsuku olulodwa (km2)
※Ithebula lepharamitha libalwa ngezinga eleqile lelongitudinal elingu-80% kanye nezinga eleqayo eliwelayo elingu-70% (sincomayo)
I-drone enamaphiko angashintshi + DG4IZIPHUMA
Xhumana nathi ukuze uthole ukhiye >
Sicela usinikeze imininingwane yakho efomini elingezansi, futhi amadoda ethu azoxhumana nawe ezinsukwini ezimbalwa zebhizinisi.